Okufana Vinyl Floor
Isitezi seVinyl Esilinganayo Samagciwane
Ungaxazulula kanjani inkinga yokuqala phansi kwepulasitiki ye-PVC?
Iphansi lepulasitiki le-PVC luhlobo olusha lwezinto zokuhlobisa ezisisindo esincane ezithandwa kakhulu emhlabeni namuhla, ezaziwa nangokuthi "impahla enesisindo esincane". Yaziwa emhlabeni wonke emadolobheni amakhulu naphakathi eChina futhi isetshenziswa kabanzi. PVC phansi plastic ha ...
Izinyathelo zokuphepha zokugcina isicwebezelisi sephansi le-PVC
Iphansi leplastiki le-PVC lisetshenziswa kakhulu ezindaweni zokuhweba nezokuhlala, ezithuthukisa izinga lesigcawu nokuthungwa kwendawo. Kodwa-ke, uma ufuna ukugcina indawo enwebekayo ikhanya futhi inhle isikhathi eside, kufanele wenze lezi zinto ngenkathi usetshenziswa. Yigcine ihlanzekile Ungasebenzisi i-cleanin ...
Yikuphi i-PVC floor enokumelana okuhle kokuhuzuka?
Mayelana nokumelana nokugqoka kokwe-PVC flooring, bekulokhu kungenye yezinkinga ezinkulu amakhasimende azinakayo. Ukumelana kokugqoka kokwe-PVC flooring kuhlobene ngqo nakho. Ukwehliswa kwe-PVC kuvame ukuhlukaniswa ngezinhlobo ezintathu: phansi okuhlanganisiwe, phansi kwe-foam futhi kuyafana futhi kugqamile
Amakhono wokufanisa umbala we-PVC emakhaya asebekhulile
Abantu abadala bayiqembu elincishwe amathuba emphakathini, futhi umhlobiso wezindawo zabo zokuhlala kufanele uvumelane nezimo zomzimba nezingokwengqondo zabantu asebekhulile ukudala indawo yokuhlala entofontofo, enhle, elula futhi elula enokuzimela okuvelele. Phansi f efanelekayo ...
Izinkinga ezijwayelekile zokufakwa phansi kwe-PVC!
Ukwehliswa kwe-PVC sekuyinto yokwakha entsha ethandwayo emakethe. Kodwa-ke, ukwakhiwa okungafanele ngesikhathi senqubo yokubeka kuzoba nomthelela omkhulu kumphumela ophelele. Lokhu okulandelayo kunezinkinga eziningi ezijwayelekile ezizosiza ukunweba ukusebenza kwepansi lakho le-PVC. Impilo yesevisi. ...
I-PVC flooring yezobuchwepheshe Standard-European Standard
Izinga laseYurophu lokufakwa phansi kwe-PVC lifushanisiwe njenge-EN. Ekuqaleni bekuyizinga lokuhlola elisayinwe amazwe ayi-15 e-European Economic Community. Leli zinga lokuhlola lihlukaniswe ngokuqukethwe okuningi. Phakathi kwabo, ibanga le-TPMF lemikhiqizo ehambisanayo esivame ukusho ukuthi ivela ...
Amaphuzu amathathu abalulekile wokuhlukanisa ikhwalithi yaphansi ehambelana ne-PVC
Kungani kunomehluko kwikhwalithi nentengo yaphansi yohlobo lwevinyl ehambisanayo? I-1.Weight PVC flooring yenziwa kakhulu ngezinto ze-polyvinyl chloride, kuzoba nenani elincane lempahla yamatshe (calcium carbonate); okuqukethwe impuphu yamatshe kuzothinta isisindo sephansi le-PVC, kepha kuzo ...
Ungayisusa kanjani i-glue kufulethi le-PVC PVC
Ungayisusa kanjani i-glue phansi engakaze yelashwe phambilini? Ingulube: Kungcono ukuyihlanza ngaphambi kokuba i-glue yomile futhi iqiniswe. Ngalesi sikhathi, i-glue iyamanzi. Ihlanzwa ngokuyisisekelo ngemuva kokuyisebenzisa noma isulwe ngendwangu, bese isula ingcina esele. Utshwala: Ingcina phansi ...
Inqubo yokufaka ye-anti-static PVC floor
1. Hlanza umhlabathi bese uthola umugqa ophakathi nendawo: Okokuqala, hlanza i-slag yomhlabathi, bese uthola indawo emaphakathi yegumbi ngethuluzi lokulinganisa, dweba umugqa ophakathi nendawo, bese ucela ulayini ohlukanisiwe ngokulinganayo ume mpo. 2. Ukubeka ...
Kungani i-vinyl floor efanayo yamukelwa esibhedlela?
1. Ukuphepha Iphansi le-PVC lenziwe ngezinto zokusetshenziswa ze-PVC zamabhodlela obisi namasethi wokumnika okwelashwa, ngaphandle kwezinto ezinobuthi, "0" i-formaldehyde. Ngasikhathi sinye, noma ngabe kuyinqubo enegwebu noma ezinye izinqubo zephansi le-PVC, ukuqina kwalo kuhle kakhulu, okunga ...
Inqubo yokufaka yaphansi i-vinyl floor
Iphansi le-PVC livame kakhulu ekuhlobiseni kwehhovisi lesimanje, ngezinzuzo zokungena kwamanzi, okungangeni umlilo, okuyisimungulu, njll .Izinyathelo zokubeka phansi ze-PVC ngesikhathi sokuhlobisa zimi kanje: futhi ulinganise umhlabathi ngokwawo. Uma ngabe ...
Izeluleko zokulondolozwa kwaphansi kwe-Giqiu homogeneous vinyl floor
Isitezi se-vinyl esihambisanayo seGiqiu siphethwe ngaphandle kokufakwa i-wax. Ngemuva kokuthi ukwakhiwa nokuhlanzwa kuqediwe, kungasetshenziswa ngqo. Ngaphezu kwesondlo esidingekayo ngesikhathi sokusetshenziswa, ifulethi elilinganayo elingenakuqhathaniswa kumele lisetshenziswe kweminye imininingwane emincane emsebenzini nasempilweni yansuku zonke. Cabanga ...